Kulan looga hadlayay sida loogu gurman karo qaxootiga Yemeniyiinta ah oo lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay sida loogu gurman karo qaxootiga Yemeniyiinta ah oo lagu qabtay Muqdisho
Kulankaan oo ay soo qaban qabisay Jaaliyadda Yemen ee Soomaaliya ku nool ayaa waxa looga arrinsanayey sida gar gaar loogu fidin karo dadka reer Yemen ee usoo qaxey gudahha Soomaaliya, waxaana ka qeyb galey xubno ka tirsan Labada gole ee dowladda, guddiga badbaadinta Qaxootiga Yemen ka imaanaya iyo mas’uuliyiin ka socotay gobolka Banaadir.
Godoomiyaha Jaaliyadda Yemen ee Soomaaliya Xuseen Saalim Axmed ayaa bogaadiyey doorka ay ka qadanayaan dadka Soomaaliyed iyo dowladdooduba u gar garida Qaxootiga Yemen ee Soomaaliya soo gaaray.
“Jaaliyadda Yemen ee Soomaaliya waxay ka markhaati kaceysaa in Soomaaliya shacab iyo Xukuumadba ay mudnaan weyn siinayaan waqooyi iyo koofur, Bari iyo Galbeed meel ay joogaanba dadka reer Yemen, ayna laabtooda u fureen una tafa xeyteen soo dhoweynta dariskooda tabaaleysan. sidoo kale Jaaliyaddu waxay ka markhaati kaceysaa hufnaanta shacabka Soomaaliyeed iyo jaceylka ay u qabaan dadka reer Yemen” ayuu yiri Xuseen Saalim.
Shariifo Macow oo xubin ka ah guddiga badbaadinta Qaxootiga Yemen ka soo cararaya ayaa shegtay in dadka Soomaaliyeed looga bahanyahey iney dhexda u xirtaan sidii dadka walalahood reer Yemen u soo dhaweyn lahaayeen.
“Ninba waa kalkiisa, maanta annaga nalaga rabaa guntiga inan dhiisha isaga dhigno (dadaal badan sameyno) dadkan sidan ku meel geen laheyn, annagu waan garan karnaa qofki gurigeedi oo kale ma u noqon karno, laakin waa inaan dadaalna inti karankeena ah garab istagnana”.ayay tiri Shariifo Macow.
Xildhibaan Dayfullaahi ayaa u mahad celiyay dowladda Soomaaliya, maamullada Puntland iyo Soomaaliland iyo dowladda Jabuuti oo walaalnimo u muujiyay, isla markaana soo dhaweeyay dadka Soomaalida iyo Yemeniyiinta ah ee ka soo cararay colaadda ka taagan dalka Yemen.
“Waxaan aad ugu mahad celinayaa amigo ku hadlaya magaca Jaaliyadda Carabta Soomaalida halkan degan ee asalka Soomaalida ah, Madaxwenaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaciil Cumar Geelle sida cajiibka aheyd deg-dega badneyd uu uga jawaabey baahida dadka Walalaha ahaa ee usoo qaxay ama usoo haajiroodey, waxan kaloo umahadcelineynaa Dowlad Gobolledyada Soomaliland iyo Puntland oo ayaguna qatey door shariif ah, dareensiiyey dadkaas Yemen Walaalo iney leeyihiin iney gurigoodi labaad usoo how-deen (jisaa kumallahi Qeyran )Gobolka banadir iyo Dowladda Dhexe ee Soomaaliya waxan ugu baqeynaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu jawaabto baahida dadka soo qaxay ee ina soo gaarey iyo dadka kale ee faraha badan ee Wadada kuso jira”. ayuu Xildhibaanku hadalkiisa ku daray.
Wasiiru dow-laha Wasaradda Warfafinta Xukuumada Soomaaliya Maxamuud Cabdi Beekoos ayaa ugu danbeyn goobta ka hadlay waxa uuna ka shejeyey doorka Xukuumadda Soomaaliya ka qadaneyso soo dhaweynta Walalahooda Yemen ka yimid, ee isaga soo cararay colaadda halkaasi ka taagan.
Gabdhaha Kubadda Kolleyga ee degmada Shibis oo ku guulestay tartan isboorti “SAWIRRO”